Zuva: Chivabvu 13, 2020
Zvinoenderana nenhau dzichangoburwa dziri muboka renhau reSivas, CHP Sivas mutevedzeri waUlaş Karasu; Akataura kuti hapana chikonzero chekuti mosque ivake munharaunda yeguta. Sarudzo yekumira Kutamba Sivas [More ...]
Reusable Mask Kunze Kunze Kunounza Movement Kune Textile Sector
UTİB Sachigaro, Pınar Taşdelen Engin akati, "Kuburitswa kwemassage kwakanaka zvekare hakuzoite chete zvakanyanya pasi rose, asiwo kunofambisa indasitiri yemachira. Pınar Taşdelen Engin, "Shandisa [More ...]
Kuziviswa nezve izvo Zvitanho uye Nheyo Zvinofanira Kuteverwa Mukutenga Mall
Mutsamba yakatumirwa kubva kuIdhipatimendi reMukati; Ichiri kuenderera mberi nemabasa ayo sepanga 11.05.2020, mukuwedzera kune iyo mitemo yakatarwa neiyo 6331 yakaverengerwa nzvimbo yehutano nebasa rekuchengetedza uye mutemo wakanangana; Kuongorora pamwe neUshumiri Yezvekutengeserana [More ...]
Denda re coronavirus rakaitika mu Wuhan, China uye rakapararira nepasirese, rakabata zvikamu zvakawanda. Hutachiona hwehutachiona hunobuda muChina uye hunowedzera kukurumidza kuenda kune dzimwe nyika kuratidza zvadzinoita mumakambani mazhinji. [More ...]
MuDHMI, iyo iri pakati peyegumi nemashanu Chibvumirano chekuwana chibvumirano cheMutyairi weKutakura-Sen, mari yekubatira yakawedzerwa katatu. Mari yekutanga yemwedzi mina yekubhadhara yakawedzerwa mu5 yakaiswa muakaundi mumatatu-matatu. [More ...]
Munguva yeCovid-19 chirwere chedenda, chinobata nyika yese, Istanbul Airport inoenderera mberi nekuchengetedza uye kuronga kuchengetedza 7/24. Turkey gedhi repasi rose, uye zvakadaro gore rekutanga iro yepasi rose HUBER [More ...]
Kune Kucherechedzwa Kwevavhoti Kunyorera kuti Internship iite KARDEMİR!
Vadzidzi vanodzidza mumayunivhesiti uye makoreji vanoda kuita basa remitambo paKarabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş (KARDEMİR) akataura chirevo pamusoro peiyo nzvimbo yezhizha yakarongwa mukati mechikamu chekugadzira uye manejimendi ekudzidza. kubva kuKardemir [More ...]
Ditaş Junction uye Railway Yakapfuura Kuvaka Yakatangwa
Niğde Meya Emrah Özdemir akazivisa kuti mabasa eDitaş Junction uye njanji kupfuura yakatanga. Ditaş Junction, iyo yakakosha kwazvo kwaNiğde, ine tsaona dzakawanda uye ndeimwe yemaronda ekubuda ropa kweNiğde. [More ...]
Vafambisi muDziviriro Vanoshandira Kwakakwira Mari dzeMagetsi
Bursa Chamber of Commerce and Industry (BCCI) Sachigaro, Ibrahim Burkay, akataura kuti Turkey ichabvisa matambudziko ari mukati mekurwisa nehupfumi hwekugadzira, "zvakadaro YEKDEM pakutanga [More ...]
Taxi uye Taxi Shanduro Disinfected Across Alanya
Panguva iyo Dunhu reAlanya richiri kuenderera mberi nekurwa kweCCIDID-19 munzvimbo dzese, matekisi nem tekisi dzinomira kushandira Alanya dzakaraswa nezvikwata zveDirector of Environmental Protection and Control. Alanya Municipality, yakaitwa mudunhu rese [More ...]
Nhoroondo yeiyo Inodzorwa Yakagadziriswa Sistimu Inotenderera muHotera
Ruzivo rwechitenderedzwa chakanzi "Kudzora Zvakagadziriswa MuNzvimbo dzekugara" chakagadzirirwa nebazi rezvetsika uye kushanya chakaziviswa. Sezvinozivikanwa, iyo New Coronary Virus (COVID-19) denda, iro rinosanganisirwa muchiyero che "Denda" neWorld Health Organisation, [More ...]
Ministry of Family, Labour uye Social Services, General Directorate yeOfficational Health uye Safety, mukurwisa mhando nyowani dze coronavirus, neine vhudzi, barber uye runako salons, pekugara mabasa uye ekudyidzana neruzhinji kutakura. [More ...]
Paunosvika kune aya madhiri, inova ndiyo nzvimbo yakanaka kwazvo kwaunogona kutarisa iyo panorama yakakurumbira yeGoridhe Horn; Kofi, anonzi mushure memunyori anozivikanwa wechiFrench Pierre Loti, anosvika. Mudiwa wechokwadi Istanbul anogara kwenguva refu muIstanbul [More ...]
Yakanga yashandurwa nguva yadarika. Iyo nyowani yeiyo Izmit Akçaray tram mutsetse yakazove yapedziswa.ZVIRI MUFANANIDZO IYO KUuya Mune chikamu cheiyo Akçaray tram mutsetse uyo unopfuura ne throughzmit Doğu Kışla, chaizvo Mehmet Ali Pasha [More ...]
Station Officer Spitting Out muLondon Catches uye Anofa muCoronavirus
Kwakaziviswa kuti mushandi wechitima chechitima muLondon, guta guru reEngland, akabatwa naCovid-19 mushure mekunge mumwe munhu akapfuura adaidzira, "Ndine coronavirus," ndokumusvipira. Maererano nenhau yeBritish Turkish; ”Transportation Union yeTSSA [More ...]
Edirne Istanbul Chitima Chinotora Nguva uye Tiketi Mitengo; TCDD Taşımacılık A.Ş. na Halkalı Iko kune inodzokorora 1 kubhururuka pakati peKatıkule. Halkalı Paavhareji nguva yekufamba pakati peKapıkule 4 [More ...]
Kugona kweBaku Tbilisi Kars Railway Line Kuwedzera
Gurukota rezvekutakura nekuvakwa kwezvinhu, Adil Karaismailoğlu, Covidien-19 matanho mukutengeserana kwekunze akawedzera kudiwa kweBaku-Tbilisi-Kars Railway (BTK) mutsara zviuru zvitatu nemazana mashanu ezviuru zvezviyo zvinowanisa mukana wekubvumira. [More ...]
Pedestrian Anopfuura Makamakenduru Zvipo muIzmit Anoshambidzwa Kazhinji
Kufamba kwemafambisirwo emvura anokoshesa zvakanyanya ekufambisa kwakachengeteka kwevagari, kunyanya muhupenyu hwemadhorobha. Vakuru uye vakaremara vagari vanowanzo shandisa masimusi mumakuru kupfuura. Kocaeli Metropolitan Municipality Parks uye Gardens Dhipatimendi [More ...]
YeAKINCI TİHA, Injini gumi nembiri dzakapihwa kubva kuUkraine
Izvo zvakataurwa kuti injini gumi nembiri dzakapihwa kuti dzishandiswe muAKINCI Offensive Unmanned Aerial Vehicle (TİHA), yakagadzirwa neBaykar Defense mainjiniya uye ayo maitiro ekugadzira anoenderera mberi. "National Industrial" inoshanda muUkraine [More ...]
Makumi gumi nemashanu mafemu matsva akavhurwa mukota yekutanga muIstanbul, zviuru zvinomwe mafemu akavharwa
Rakaitirwa Istanbul, apo 43 muzana Turkey kuti kunze kwenyika, kunze kwenyika ungaderedza 36,9 muzana April zvichienzaniswa yapfuura gore. Nepo kutumira kunze kwenyika kuchiderera muindasitiri yakagadzirirwa-kupfeka uye yekufuka, iyo yakawedzera munharaunda yekudzivirira uye yekushambadzira indasitiri. vakawanda [More ...]
'Varwi vadiki' veBig Missions Black Hornet uye Aselsan Nano UAV
ASELSAN yakatanga kuvhenekera yayo smart Nano isina kuvharwa Aerial Vehicle (Nano-UAV) paTEKNOFEST'19 kwechinguva. Inogona kuitirwa munzvimbo dzakavhurika uye dzakapfigwa nzvimbo dzekuwanikwa, kuongorora uye zvinangwa zvehungwaru [More ...]
İmamoğlu Gadzira Iyo Yekutanga Inobatanidzwa Iftar Yegore Nevashandi veMetro Kuvaka
PresidentBB Mutungamiri Ekrem İmamoğlu vakatadza kuziva kuti iftar yakagadzirwa mudzimba dzevagari nekuda kwedenda regore rino. İmamoğlu, uyo akagadzira iyo nguva yekutanga yegore nevashandi veÜmraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Line, akati, "MuRamadan, kazhinji [More ...]
VaIzmiriya havana kurega chikamu chechitima
Sekureva kweIzmir Metropolitan Municipality ESHOT General Directorate dhairekitori, mabhazi anokwenenzvera mazuva maviri ekutanga akawedzera neavhareji ye11 muzana muvhiki yaMay 14 zvichienzaniswa nenguva yakafanana yevhiki rapfuura. Iyo tafura inogutsa [More ...]
Zuva rekuzvarwa kwaFlorence Nightingale, muvambi webasa revanamukoti, rinoonekwa seZuva Revanamukoti paMay 12, uye svondo iro zuva rinotanga rinotambwa seSvondo reNursing World pasirese. Akazvarwa istanbul [More ...]